Ciyaaryahankii labaad ee ka tirsan kooxda Juventus oo laga helay caabuqa Coronavirus – Gool FM
(Turin) 17 Mar 2020. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa ku dhawaaqday in xiddigeeda Blaise Matuidi uu noqday ciyaaryahankeeda labaad ee laga helay caabuqa Coronavirus, kaddib Daniele Rugani.
“Blaise Matuidi wuxuu maray baaritaano caafimaad oo muujiyay inuu qabo Coronavirus-COVID-19” ayuu u dhignaa bayaan ka soo baxay kooxda kubadda cagta ee Juventus.
“Ciyaaryahanka ilaa iyo Arbacada 11-kii March wuxuu ku jiray go’doon guriga ah, waxaana uu sii wadi doonaa kormeerkiisa, isla markaana wuxuu la socon doonaa nidaamka, wuu caafimaad qabaa mana jiraan waxa hadda muuqda”.
Rugani ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu horreeyay ee laga helay caabuqaan horyaalka Serie A 11-kii March, waxaana 121 xubnood oo kooxda ah oo ay ku jiraan xiddigaha ay isku kooxda yihiin iyo madaxweyne Andrea Agnelli loo diray guryahooda si loo karantiilo.
Waxaa si deg-deg ah u soo raacay Manolo Gabbiadini oo Sampdoria ah oo ay wehliyaan xiddigaha kala ah Blucerchiati Morten Thorsby, Antonino La Gumina, Albin Ekdal, Fabio Depaoli iyo Bartosz Bereszynski ayaa durba laga helay caabuqaan.
Dhinaca kale xiddigaha kooxda Fiorentina ee kala ah Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone and German Pezzella ayaa laga helay caabuqan, waxaana sii raacaya labo xubnood ee ka tirsan waaxda caafimaad ee kooxdooda.